Ahoana ny fametrahana Anaconda amin'ny dingana VPS amin'ny fomba mora | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana Anaconda amin'ny VPS
Isaac | | GNU / Linux, Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Betsaka ny olona miasa miaraka amin'i Python no nanomboka nahatsikaritra an'io Tetikasa Anaconda. Izy io dia fizarana loharano maimaimpoana sy maimaim-poana amin'ny fiteny Python sy R. Ampiasaina betsaka amin'ny siansa data sy ny fianarana milina. Noho izany, fampahalalana marobe dia azo zahana amin'ny famakafakana haingana.
Tena marina izany tsotra ny mametraka, mihazakazaka ary manavao, ankoatry ny mifanentana amin'ireo tetikasa manan-danja toy ny Tensorflow. Ato amin'ity fampianarana ity dia hasehoko anao ny fomba ahafahanao mamorona ohatra VPS rahona hametrahana Anaconda ao ...
1 Inona ny fizarana Anaconda?
2 Fomba fizarana Anaconda
3 Inona no atao hoe VPS?
4 Mametraka Anaconda tsikelikely
4.1 Mamorona kaonty Clouding ary manomàna ny sehatra VPS
4.2 Mametraka Anaconda
Inona ny fizarana Anaconda?
Anaconda dia tsy inona fa ny suite open source, ambanin'ny lisansa BSD, izay misy andiana fampiharana sy tranomboky ho an'ny data science miaraka amin'ny fiteny fandaharana toy ny Python. Ity fizarana ny fiteny fandaharana malaza ity dia miasa ho mpitantana tontolo iainana, mpitantana fonosana ary manana repertoire goavambe amina fonosana an-jatony.
Ao anatin'ny Distrikan'ny Anaconda dia ahitanao sakana fototra efatra:
Anaconda Navigator (GUI ho an'ny fitantanana tsotra sy tsotra).
Tranomboky ho an'ny siansa angona.
Conda (baikon'ny fitantanana CLI)
Izy rehetra hapetraka ho azy miaraka amin'ny fametrahana ny fonosana, satria hasehoko tsikelikely avy eo.
Fomba fizarana Anaconda
Anaconda Distribution manana endri-javatra mahaliana izay mahatonga azy io ho zava-dehibe tokoa eo amin'ny tontolon'ny fanadihadiana data. Ny tena manamarika dia:
Tsy miankina amin'ny orinasa rehetra izany, satria ny fokonolona dia mitazona azy io ary loharano misokatra ary koa maimaim-poana.
Izy io dia sehatra fiampitana, ka afaka miasa amin'ny GNU / Linux, macOS ary Windows.
Tsotra be izy io, afaka mametraka sy mitantana fonosana sy tontolo iainana ho an'ny siansa angona amin'ny fomba tsotra sy haingana.
Tetikasa siantifika maro no mampiasa azy, ka azo itokisana tanteraka.
Feno fitaovana ilaina hanamorana ny asanao, na dia ho an'ny fianarana milina aza.
Izy io dia mifanaraka amin'ireo mpijery angona toa an'i Matplotlib, Datashader, Bokeh, Holoviews, sns.
Fitantanana mandroso sy mahery vaika, miaraka amin'ny fahafaha miditra amin'ny loharanom-pahalalana ho an'ny fianarana milina mandroso.
Tsy hanana olana amin'ny fiankinan-doha amin'ny fonosana sy ny fanaraha-maso ny kinova ianao.
Mamorona sy mizara antontan-taratasy miaraka amina kaody fanangonana mivantana, fampitoviana, famaritana ary anotasy.
Azonao atao ny manangona kaody loharano Python amin'ny milina rehetra mba hanatanterahana haingana. Ho fanampin'izay, hanamora ny fanoratana ny algorithma mifanindran-dàlana.
Manohana ny informatika avo lenta.
Ny tetik'asa ao Anaconda dia azo entina, ka azo zaraina na haparitaka amin'ny sehatra hafa izy ireo.
Inona no atao hoe VPS?
Na dia azonao atao aza ny mametraka Anaconda Distribution amin'ny PC mahazatra, na amin'ny mpizara anao manokana, amin'ity lesona ity dia hasehoko anao ny fomba fanaovana azy amin'ny mpizara VPS, satria manana andian-tombony maromaro izy, toy ny hoe afaka mitantana lavitra azy avy amin'ny mpampiasa maro, fantsom-pifandraisana lehibe kokoa, refiteraina, fahazoana be ary fihenam-bidy lehibe raha oharina amin'ny safidinao ny manana mpizara anao manokana.
Ho an'ny saram-pisoratana kely dia afaka manana serivisy ianao VPS (Virtual Private Server), izany hoe mpizara tsy miankina virtoaly. Amin'ity tranga ity dia hiankina amin'ny Clouding ho an'ny tutorial aho. Noho izany, rariny ny milaza fa ity VPS ity dia "parcel" natokana ho anao manokana amin'ny ivon-drakitra an'ity mpamatsy ity. Azonao atao ny manao izay tianao, toy ny fametrahana mpizara Linux sy fampiharana marobe. Amin'ity tranga ity dia hametraka Anaconda izahay.
Ity VPS ity miasa ho toy ny milina ireryIzany hoe, miaraka amin'ny RAM-ny azy, miaraka amin'ny toerana fitahirizany ireo SSDs haingana, miaraka amina andiana CPU voasokitra, ary koa rafitra miasa.
Ary tsy mila miahiahy momba ny fitantanana ireo fitaovanao foibe angon-drakitra ianao, na mandoa saram-pandrenesana angovo na fantsom-pifandraisana ho an'ny mpizara, avelao ihany vidin'ny fotodrafitrasa ilaina...
hametraka Anaconda dingana
Ny serivisy voafantina, araka ny nomarihako, dia Rahona.io, izay hamoronako ohatra na VPS miaraka amin'ny rafitra fiasa GNU / Linux izay avy mametraka Anaconda amin'ny fomba tsotra. Amin'izany no ahafahanao manomboka amin'ny siansa angon-drakitra miaraka amin'ny antoka nomen'ity mpamatsy ity, satria manana fanohanana 24/7 amin'ny teny Espaniôla izy raha sendra misy zavatra mitranga, ary ny ivon-toerany dia ao Barcelona, ​​noho izany, eo ambanin'ny lalàna fiarovana ny angona eropeana. Noho izany ny fisorohana ny GAFAM / BATX, zavatra saika manan-danja amin'izao fotoana izao ...
Mamorona kaonty Clouding ary amboary ny sehatra VPS
Alohan'ny hanombohantsika, ny zavatra voalohany dia midira amin'ny serivisy Clouding. Azonao atao ny miditra ao amin'ny tranokala ofisialiny ary misafidy ny tahan'ny mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ireo taham-pahavitrihana ireo dia samy hafa amin'ny habetsaky ny RAM, ny fitehirizana SSD, ary ny CPU vCores izay anananao ho an'ny VPS anao. Na dia mila mihoatra noho izay atolotry ny salan'isa aza ianao dia manana safidy hanamboatra mpizara mahazatra.
Amin'ny maha-tetikasa fandalinana angona siantifika anao, mahaliana raha manana ny lehibe indrindra ianao manisa fahombiazana azo atao, ary koa RAM be dia be. Na dia hampiasa azy io amin'ny tetikasa maotina kokoa aza ianao, dia tsy ho ilaina loatra ...
Raha vantany vao nisoratra anarana sy manaraka ny dian'ny mpamosavy ianao, ary koa ny manamarina ny adiresy mailakao, afaka miditra amin'ny tontolonao ianao. Ho an'izay, tsy maintsy Hiditra ao amin'ny Clouding:
Efa ao amin'ny serivisy ianao ary hahita izany ny tontonana fanaraha-maso intuitive. Raha te hanomboka hamorona ohatra ianao na ny mpizara VPS dia mila tsindrio ianao Tsindrio eto raha hamorona ny mpizara voalohany:
Manampy anao amin'ny efijery fikirakirana an'ny mpizara VPS anao. Ny zavatra voalohany ho hitanao dia ny safidy hametraka ny anarana tadiavinao amin'ny VPS anao. Avy eo ny karazana rafitra fiasa tianao hapetraka. Azonao atao ny misafidy eo amin'ny Windows na Linux, ary ao anatin'ny faritra Linux dia misy disos misy maromaro. Amin'ity tranga ity dia nisafidy Ubuntu Server 20.04 aho, saingy azonao atao ny misafidy izay tianao:
Vantany vao vita dia midina amin'io pejy io ihany ary hahita safidy hafa hisafidianana ny loharanom-pahalalana: Fahafahana RAM, fahafaha mitahiry SSD, na isan'ny core CPU tokony homenao ny VPS-nao. Ataovy ao an-tsaina fa afaka mitantana azy ireo araka izay itiavanao azy ianao, na dia te hamorona VPS maromaro aza ianao ary hizara azy ireo eo aminy ... Ary tadidio fa afaka mametaka drafitra ambonimbony kokoa foana ianao raha mila izany.
Manana safidy ihany koa ianao handrindrana ny Firewall na ho an'ny backup. Raha ny tokony ho izy dia tsy ilaina ny manohina izany, na dia misy tianao aza hanatsarana ny filaminana, tohizo. Ny zava-dehibe dia mamorona sy manome anarana ny lakile SSH. Misaotra azy io, afaka miditra lavitra ianao hitantanana ny VPS anao nefa tsy mangataka ny teny miafinao isaky ny mandeha.
Avereno jerena fa OK ny zava-drehetra ary pulsa Eviar. Hitondra anao any amin'ny efijery iray hafa izay efa miseho ny VPS anao. Amin'ny satany dia ho hitanao fa mbola mametraka sy manamboatra. Aza matahotra anefa fa vita haingana be izany:
Afaka fotoana fohy dia ho hitanao fa vita ary hiseho ny sehatra active. Amin'izany fotoana izany dia azonao atao ny mampiasa ny rafitra fiasanao hametrahana izay ilainao (amin'ity tranga Anaconda ity).
Tsindrio ilay anarana nametraka ny VPS anao ianao ary manitsy anao amin'ny pejy hafa miaraka amin'ny famintinana ny fampahalalana momba ny mpizara izay hametrahanao Anaconda:
Noho izany, ny zava-dehibe dia ilay faritra antsoina hoe Ahoana ny fomba hidirana amin'ny mpizara. Eo no misy ny fampahalalana ilainao amin'ny fidirana, ny IP an'ny VPS, toy ny teny miafina, ny mpampiasa (faka) na ny lakilen'ny SSH alaina.
Avy amin'ireo data rehetra ireo, miaraka amin'ny Server IP, root ary teny miafina afaka miditra amin'ny lavitra ianao izao hanohizana ny fametrahana ny Anaconda ...
Vonona ho an'ny rehetra izao Fametrahana Anaconda ao amin'ny VPS. Afaka mitsidika ianao amin'izany tranokalan'izy ireo hamaky bebe kokoa momba ny tetikasa na hanamarina ny kinova farany misy.
Hanombohana dia tsy maintsy midira amin'ny lozisialy VPS amin'ny alàlan'ny SSH. Amin'izay, avy amin'ny distro eo an-toerana azonao atao ny mametraka ny zavatra rehetra ilainao amin'ny mpizara. Ho tsotra toy ny fanokafana ny terminal anao sy ny fanoratana ity baiko manaraka ity (tadidio ny fanoloana ny IPd an'ny VPS izay hitanao taloha tao amin'ny Clouding):
Hanontany anao ve aho ny tenimiafina, tapaho ilay nasehon'i Clouding anao ary apetaho. Hanome anao fidirana izany. Ho hitanao fa niova ny mailaky ny terminal anao, tsy ny eo an-toerana intsony no hampiasanao azy fa ny an'ny milina lavitra izao. Noho izany, ny baiko rehetra soratanao avy eo dia hovitaina amin'ny mpizara VPS.
Ankehitriny rehefa mahazo fidirana ianao dia manomboka ny zavatra manaraka misintona ary apetraho Anaconda miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto hitondrana azy any amin'ny lahatahiry vonjimaika ary alao ny kinova azo alaina avy amin'ny toerana anaovana azy ofisialy:
Aorian'izany dia hanana Anaconda ianao, ity manaraka ity dia manamarina ny tsy fivadihana amin'ireo angon-drakitra alaina amin'ny alàlan'ny vola SHA-256. Ho an'izay, alefaso fotsiny ity baiko manaraka ity:
Y dia hamerina hash amin'ny fizahana.
Tsy maintsy izao manomboka Anaconda miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ity dia hitondra anao any amin'ny hafatra mangataka anao hanery ny ENTER ary hitondra anao any amin'ny fifanarahana fahazoan-dàlana Ananconda izany. Afaka mandeha hatramin'ny farany ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana Intro ary hanontany anao izany raha te-hamaly amin'ny eny na tsia ianao. Izany hoe, raha manaiky ny fepetra ianao na tsia. Soraty ny "eny" tsy misy fitanisana ary kitiho ny ENTER. Ny zavatra ho hitanao manaraka dia:
Ny dingana manaraka dia ny mifantina ny toerana fametrahana. Tsindrio ny ENTER ho an'ny làlana aseho anao amin'ny alàlan'ny default na manorata làlana hafa raha tianao ... Hanomboka izao ny fametrahana Anaconda. Afaka fotoana fohy.
rehefa vita ny dingana, hahazo hafatra toa ity manaraka ity ianao, manondro fa vita soa aman-tsara:
Karazana Eny hanomboka conda. Ankehitriny dia hamerina anao amin'ny alàlan'ny VPS anao io. Manana zavatra hafa ianao alohan'ny ahafahanao mampiasa kapaoty, ary izany dia ny fampiatoana ny fametrahana miaraka amin'ny:
Ary azonao atao izao mampiasa conda ary manomboka manome Anaconda mahasoa ... Ohatra, afaka mahita fanampiana momba ireo safidy ianao ary mitanisa ireo fonosana misy miaraka amin'ny:
Na ny fametrahana ny tontolo iainana ho an'ny Anaconda aza mampiasa python3, ohatra:
dia mamaly y amin'ny fanontaniana apetrakao mba hirosoana ary hapetraka ny ilaina.
Afaka efa afaka ianao mampihetsika ny tontolo vaovao manomboka miasa sy mankafy ...
Ary satria efa nametraka sy niasa ny zava-drehetra izahay, dia azonao atao ny manamarina ny hery sy ny fahaizan'ny olona manome tolotra VPS toa ilay nasehonay anao tao amin'ny Clouding. Anaconda dia iray amin'ireo karazana fampiharana sy fitaovana maro karazana azonao apetraka sy ampiasana. Tsy ny zava-drehetra no tonga amin'ny famoronana tranokala. Misy safidy maro hafa azonao ampiasaina amin'ny VPS. Raha manana fanontaniana ianao dia mamela hevitra izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Ahoana ny fametrahana Anaconda amin'ny VPS
Kubeflow: Fitaovana hianarana milina ho an'ny Kubernetes
University of Minnesota voarara amin'ny fampandrosoana kernel Linux